Baroordiiq 3 cisho ah oo loo sameeynayo madaxweynihii hore Cali Mahdi Maxamed | Xaysimo
Home War Baroordiiq 3 cisho ah oo loo sameeynayo madaxweynihii hore Cali Mahdi Maxamed
Baroordiiq 3 cisho ah oo loo sameeynayo madaxweynihii hore Cali Mahdi Maxamed
Dowladda Soomaaliya ayaa ka tacsiyadaysay geeridii ku timid Allaha unaxariistee madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed oo caawa ku geeriyooday magaalada Nairobi ee caasimadda dalka kenya, oo xaalad caafimaad markii hore loo geeyay.
Dowladdu waxaa ay sheegtay in muddo sedax cisho ah loo sameyn doono baroordiiq iyadoo calanka Soomaaliya hoos loo dhigi doono si loo muujiyo murugada geerida madaxweynihii hore Cali Mahdi Maxamed.
Sidoo kale dowladdu waxaa ay sheegtay in loo saarayo guddi ka shaqeeya aas -qaran oo loo sameynayo marxuumka.
Qoraalka ay soo saaraty Madaxtooyada Soomaaliya ayaa sidaan u qornaa.
MADAXWEYNE FARMAAJO OO KA TACSIYEEYEY GEERIDA MADAXWEYNIHII HORE EE DALKA
Alle waxaan u weydiinayaa Marxuumka in uu hoygiisa ka yeelo Jannatul Fardowsa, samir iyo iimaanna uu ka siiyo qoyskiisa iyo guud ahaan Dowladda Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday.